David Wilkerson ku saabsan dhaqdhaqaaqa iimaanka | Apg29
"Wadaad A ayaa sheegay in, ilaa hadda Waxaa soo martay, in hal maalin, wacdiye u istaagaan oo waxaad ku tidhaahdaa, dajinta xagga Rabbiga Waxaan helay, waa wakhti si ay u bilaabaan Mary caabudno. Waxaa tegi doonaa meesha."
"Tani waa mid ka mid ah humiliations ugu weyn oo Ciise Masiix ku dhaqma tan Masiixa Tani injiilka qalloocan waa khubad xaddi -.. Xataa Shiinaha, Africa iyo adduunka oo dhan, waana injiilka Maraykan abuurtay iyo faafin by wacdiyayaal American hodan iyo wadaadada Rich.! "
Waxaan haddana ku soo qaato, si aad u fahamto darnaanta haddii aadan hore u sameynin. Waxaan u mahadcelinayaa in Ilaah i badbaadisay ka fikirka been dhawaaqidda oo anna waan ku qiran sida dembigu, isagoo waxbarashada been helay.
Waxaad Murugoon waxa ay u egtahay in Sweden ayaa maanta dadka Ilaah ka mid ah? Halkee waa hadal ah oo ku saabsan rayrayn ee aroosadda ah? Mararka qaar waxa ay u muuqataa in inta badan ee Masiixiyiintu waa sii saaraynaa ka gees ah oo caan ka badan Ciise soo laaban doonaa!
aad diyaar u Ciise inuu yimaado tahay? hadalka Cross ah, marka aad maqashay dambayn, 1886?
Hadda waxaad ka heli wax yar reading ah oo ku saabsan David Wilkerson waxa uu ku qoray oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa iimaanka.
Golaha The dulleeyay
Asalka Ingiriisi horyaalka -Waxaa la caayo shirka weyn ku
Sefanyaah 3: 18- kuwa u calool xun, waayo, shir quduus ah iyaga waxaan soo wada ururin doonaa, kuwa kaa, kan warka culus ee Dulli. (1917)
Tani waa wax sii sheegidda a dual Sefanyaah. Waxay leeyihiin inay sameeyaan leh caruur Israa'iil, laakiin sidoo kale la ruuxiga ah Siyoon (kaas oo ah kiniisadda Ciise Masiix maalmaha ugu dambeeya). First of dhan, uu ku hadlaa in Yuhuudda - in Ilaah isu keeni lahaa ku kala firidhsan - laakiin waxa uu keeni lahaa oo kaliya dib kuwa lahaa qalbi jabay xaalad gataan Israa'iil ee - wuu soo xusuusan doono, kuwaas oo u dhashay dulli oo dhan - oo dhan waxyaalo cabsi badan in ku tageen in Ilaah guriga. Si aad kuwa qaadeen culaabtii, wuxuu ku yidhi, "Waxaan idinku soo ururin doonaa." Oo wuxuu iyagii siiyey oo ballamo ku weyn
wax sii sheegidda waxaa sidoo kale ka hadlay inay kiniisadda Ciise Masiix maalmaha ugu dambeeya. Axdigii Hore dhexdiisa, oo reer binu Israa'iil ah ayaa ugu baaqay in ay iid toddoba maalmood ah. Oo maalintii siddeedaadna - yeedhay shir. Waxay ahayd markaa in ay ku wada kulmeen - wax kasta oo ku rid kale ku leexan oo ay diiradda saaraan u Sujuudi oo ku weynaynaya ay Aabbihiinna jannada ku jira. Qorniinku wuxuu leeyahay, "Oo maalintii siddeedaadna waa inaad yeelataan shir quduus ah." ururinta iidda Tani waxay ka dhigan Axdiga Hore, Ilaah soocay kiniisadda u baahan yahay in uu la kulmo Rabbiga.
Tani waa kiniisadda Ciise Masiix maalmaha ugu dambeeya. Sida laga soo xigtay Sefanyaah, gurigii Ilaah maalmaha ugu dambeeya in la dulleeyay. erayga Cibraaniga ah halkan ka dhigan tahay "ceeb iyo sharaf dhac". Waxa ay noqon doontaa ceeb iyo gurigii Ilaah ku cisa jebisaa. Waxaan ma ka hadlayaan riddada ah, kaniisadda casriga deeqsi - Rabbigu wuxuu leeyahay, in Maalinta Qiyaame wuu kiniisadda la samayn doonaa. Waxaan ilaahay ka baryaynaa kartaa, laakiin waa in aynaan baabba ilmada ma on aan ahayn Golaha dhabta ah.
Ilaah wuxuu doonayaa dad doonaya in ay barooran oo u ooyday aawadiis dulli ah in uu yeesho Church of Ciise Masiix ee maalmahan. Aan la hadlayo ku saabsan kaniisadda in uu ku dhashay maalintii Bentakostiga. Aan la hadlayo ku saabsan kaniisadda in uu u dhashay inuu Paul iyo rasuulladu waxay bari. shirka in uu ku dhashay ee runta ah ee Ciise Masiix inuu u taliyo. Kaniisadda dhashay-mar kale la weerarayo. Golaha waa Dullaysan.
Waxaa la sii sheegay in wakhtiga dulli, ceeb iyo nacasnimo, Ilaah sara kicin doonaa hadhay oo quduus ah, kuwaas oo barooran doontaan oo ooyi badan wasakhda this - Ilaah yeelan doonaan kuwa hadhi doona in yar tiimbanaynay oon aan ku fadhiisan doona halka waxan oo dhan weerara Assembly. Ilaah wuxuu leeyahay: "Waxaan doonayaa yaa ugu sugan qoomkii content in ay ku noolaadaan nolol wanaagsan ma noqon doonto iyo iska indha-tiray ee dunidii oo lacag nebiyo been ah waalan gurigii Ilaah u galay oo ay baabbi'iyaan wax walba."
Ilaah wuxuu dadkii u ah oo u murugoon waxay kaga soo gudbeen soo ururin doonaa - haddii aad run ahaantii Rabbiga jecel oo jecel kaniisaddiisa, ma waxaad eegi kartaa waxa dhacaya maanta (iyo Waxaan soo xusuusanayaa humiliations kuwaas by magaca). Haddii ka dib markii ay maqleen waxa aan ku leeyahay oo ku saabsan humiliations kuwan, guriga socon karaa kaniisadda oo waxaad ku tidhaahdaa, "waan xajiyaa waxa ku qoran Matayos 18, albaabbadii Haadees kuma kici doona Golaha, anigu ma aan xanaaqi doonaan aniga igu saabsan, Ilaah ayaa wax walba gacanta.
Waa kuma filna. Ilaah wuxuu isticmaalaa dadka. Ilaah wuxuu isticmaalaa dadka si ay shuqulkiisa u sameeyaan. Isagu ma soo diri Malaa'igta. Malaa'igta u ooyi, laakiin Ilaah ma isticmaali Malaa'igta in ay soo hooyaan ay Ujeeddada. Waxa uu isticmaalaa rag iyo dumar la Quluubta jebiyey iyo culayska -. Xukun ah albaabka, Ciise. Maalinta Rabbigu waa soo dhow dahay.
Toos odayaasha. Toos wadaadada. Toos adhijirrada.
View on kaniisadda. Hel Rye ee. waxaa Xiro. Waa maxay sababta aan qaadan lahaa on Kanu waa warka culus ee ku dulli shirka weyn? Joel ku yidhi, "maxaa yeelay, abuur xun ayaa loo beeray.
injiilka A wacdiyey in uu helo wax kasta oo hortiisa si ay u engegaan. Wax walba waa engegayaa cagaaran iyo rabaani ah oo saafi ah. Abuurku waa dadka ruttet- gaajoonaya si aad u maqasho ereyga Ilaah saafi ah laakiin waxaa jira seeraha lahayn. lo'da waxaa tagay iyo gaajo. webiyaasha qallajin soo baxay. dab qalaad waa wax baabbi'iya, adhijirradii. Ezekiel sheegay in Shepherds hoos ku tuman beerihii wanaagsan oo wax cun ugu fiican naftaada. Waa maxay waxyaalaha ugu ceebta ka dhacaya ee Church of Ciise Masiix maanta?
Tani waa mid ka mid ah humiliations ugu weyn oo Ciise Masiix ku dhaqma tan Masiix. Tani injiilka qalloocan waa khubad xaddi - xataa Shiinaha, Africa iyo adduunka oo dhan. Waa injiilka Maraykan abuurtay iyo faafin by wacdiyayaal American hodan iyo wadaadada. Maalqabeenka!
Waxay i naxay in si dad badan maqli karo guutooyinkiisa oo la arko videos in ka soo baxay shirarka barwaaqo, kuwaas oo aan ku qaylinaya oo iyaga u taliya. sun waxa uu ku faafay dunida oo dhan. Cuba ku saabsan tahay in la furo, oo ay u xiiseynayey in ay hesho on mid ka mid ah markii ay guul injiilka oo waxaad ku tidhaahdaa yihiin, "ayaad masaakiintaada dheer oo ku filan, Ilaah waxa uu rabaa oo dhan Cubanka waa hodan ku ahaadaan."
Todobaadkan waxaan helay cajalad video ah oo la duubay shirarka Kenneth Copeland ee. Waxaan dhageystay Guddoomiyaha oo noqday haatisa. Friends akhriyo Axdiga Cusub, waxaad ka heli doontaa in Rasuul Bawlos ku tilmaamay kuwa ay rumaystay, iyagoo ahaa rasuullo been ah. Waxa uu ka digay oo ah ayuu ugu hadlay magacyadooda. Waxaan idinku leeyahay, haddaad maqasho waxa aan kugu leeyahay, laakiin inuu u baroorto, ka dibna aad tahay indhoole. Waxaad tahay ruuxa oo indha la '. Waxaad Leeyihiin Quluub adag. Qalbi hubka dagaalka adag ku hareeraysan si injiilka saafi ah ma geli karto. Waxaad noqotay si kahaayeen injiilka qaloocan this in aadan ahayn in aad maskaxdaada midig. Waxaad aan runta ku wacdiyo. Waxaad iyaga ma muujin karaan wax kasta oo qoraal ah sababta oo ah waxay leeyihiin hubka u ah Quluubtooda. Quluubtooda adag.
Qaar ka mid ah oo idinka mid ah ma ay heli doonaan. Haddii aad naftaada la Copeland ama cajalado Hagin ee soo galay, aadan jeclaan doonaa waxa aad maqasho. Saaxiibada, Waxaan ahay adhijirka ah, waxaan loo yeedhay by Ilaah. Waxaan ku siiyey kaniisadda this yaboohay yabooh run ah. Ilaa iyo inta aan ku rostrum this istaagaan, waxaannu aragnay yeey qaba dharka idaad, kuwaas oo u yimid in ay xadaan adhiga, waa in aan kor u taagan iyo qaylin. Waxaa kor uu si aad u arrinta wax laga qabto. Waxaan fadhiistay todobaadkan iyo dhageystay Guddoomiyaha a shir ah oo aan ka naxay oo ay wax yeelaan. yimid cidhiidhi sayidkaygiiyow A ayaa i kor. Waana sababta aan wax ku wacdiyo fariin this. Barooran dul.
Waxa aan soo qaadan ereyga erayga wixii la yidhi. ku hadla ayaa si dhib leh u hadli kari dhammeeyayna maxaa yeelay, dadkii oo dhan oo soo iyo in jeebkooda lacag. Sababta ay sameeyaan in uu yahay cilmiga cusub ayaa ka soo baxay oo waxaad ku tidhaahdaa, "haddii aad rabto in aad la barakeeyey, si aad u baahan tahay si aad u ogaato wax wacdiyi jiray barakaysan, ama wadaad waxaad ka heli kartaa sababta oo ah waxa uu leeyahay waxyaabo badan oo aad u hesho wax badan kan yar, xitaa waxa laga qaadi doonaa ka uu leeyahay. Haddii aad ka heli Wacdiyuhu wuxuu guul u barakaysan, iyo lacag u siin, oo waad barakaysnaan doontaan. The more barakaysan uu yahay, haddii aad siiso kuwa ugu barakaysan - "waa sida nidaamka Ahraamta ah. Haddii nimankanu ay dunida joogay cilmaani ah, ay soo afjari lahaa oo xarig ah. qorsheyaasha Ahraamta. mid ka mid ah waa kuwa ugu sareeya iyo kuwa u muuqda in ay ugu wada quduusan, oo la hadlay loudest. Boqolaal dad ah ayaa u yimid ilaa meelo uu ku ridin. Dambiilayaale ayaa sheegay, "tani waa injiilka a free? Raso? "
Dhegayso waxa lagu yidhi. Gudoomiyaha kacay oo wuxuu ku yidhi, oo ku saabsan carmal miskiin ah qaata gargaarka bulshada ku siinayaa 5 doolar, sidaas waa inaad ka qaadato, wuxuu Eliiyaah soo qaaday naag carmal ah cuntada ee la soo dhaafay. Waxaad kiisa subkan, oo aad u mudan yihiin, waxay ku qaadan. "Guddoomiyaha isku yidhi," Waxaan ku nooshahay guri cagta square ah 1,000. Waxaan dhisi doonaa mid weyn hadda. Mid ka mid ah in Boqor Sulaymaan noqon lahaa faani. Waxaan bixisay kaliya 15,000 oo doolarka Maraykanka waayo, eeygii a. Ha aad aragto giraanta heer sare ah on my farta, waxaan ku jiray dhawaan in Jamaica iyo bixisay 32,000 oo doolarka Maraykanka ah waxaa loogu talagalay. Waxaan rabnaa in aad ogaato in marka dadka meesha aan ku nool socda ee la soo dhaafay aan guri nagaadi oo fiiri Rolls-Royce ee laga galo, si ay u ogaadaan in uu jiro Ilaah oo jannada ku jira. "
Bal ii sheeg, waa injiilka? Ii sheeg, hana ooyina, waxa ka badan?
Mid ka mid ah ku hadla ayaa istaagay oo ku yidhi, "axdi Waxaan ka Yeellay la Brother Copeland in sannadka soo socda, ma jiro oo inaga mid ah ku xanuunsado hal maalin. Waa in aynaan dareemaan daqiiqad ah ku dhiiri gelin. Waxaan ma ka heli doonaa buka ama u baahan tahay wax. Waa in aan ku raaxeysto oo dhan barakooyinka. Waan ka soo horjeednaa dhibaato oo dhan, xanuun oo dhan, oo dhan dhibaatooyin dhaqaale. " waxaa codadka wanaagsan haddii aad tahay on top.
Tani waxa inta badan i walbahaarin. Tani wacdiyey. "Ruuxa Quduuska ah ma in lagu shubo karaa idinku kor ilaa aad ku sugan tahay u socodka lacagta. Ka hor inta aad ku guulaysato, Ruuxa Quduuska ah ma waxba ma aan samayn karo. "
Ka fikir waxa ku saabsan! Sidee saamayn ayuu kugu? Waa maxay waxa ay taasi ruuxiinna in marka aad aragto dadka saboolka ah ee ku nool ka soo qaado gacantii in ay afka, iyo si lama filaan ah oo uu sheegay in, "lacag doondoonaan" iyo dadka socda sida waalan iyo markii ay ordaan, waxay dhihi waxaan "aan sheegan Xoolaha."
Markaas waxaan arkaa dadka gurguurto sida abeesooyin ka mid ah kuraasta iyo dhulka. Anna waan fiirin Evangelist u istaagaan oo ku foodhyi doonaa sida abeesada iyo dadka meel kasta ku dhacaan. Saaxiibada, waxa socday?
Bahdilka ee högtidsförsamligen! Nebigu wuxuu u yeedhay "eeyaha u hunguri weyn, oo waardiyayaasha taaga kuwa aan cibaadada lahayn". Saaxiibada, haddii qalbigii Ilaah iyo cidhiidhi Rabbiga aad qaylin doona la Isaiah aad lahaa, ay yihiin waardiyayaasha indha la ', jaahil, eeyo carrab la', hurdada, hurdo jecel, eeyaha u hunguri weyn oo weligoodna ma dhergi karaan.
"Waxaan leeyahay 1,000 mitir oo laba jibbaaran laakiinse waxaan ka iibin doonaa, oo guri in Boqor Sulaymaan ku noolaan karaan ninkeyga waxaan dhisi doonaa" Si aad marnaba heli filan. Waxa uu sheegay in, "adhijirro aan innaba wax garan karin, qof walba ayaa doonaya inuu iyada, wax si aad u hesho la kulmay baahidooda gaarka ah. Yeremyaah u tudhay erayada ma. Waxa uu sheegay in, "My dadka waa ido oo kale laga badiyay. adhijirradoodii ayaa ka dhigay inay ambadaan "Waxaad ku odhan," Pastor, waxaad xaq u lahayn in ay ku hadlaan sidaa darteed si adag oo ku saabsan mowduucan leeyihiin "Haddii aad u malaynayso af badan ayaan u ahay, ka dibna akhri Ezekiel 34:.. 1-10.
Waxaad qaadan 50 milyan oo naag carmal ah oo ka soo iibsataa oo eey 150 000 karoon. Waxaad ka fariistay carmal miskiin ka qaado, oo waxaad iyaga ku tidhaahdaa in aanay rumaysad leh oo ku filan - waayo, ma ay guul. Waxaad qaadan dhogortana ka idaha. ma Waxaad u raadinaya Naftooda, raadinaya lacag. "Adhijirro naftooda iyo iyagoo aan idaha wax fatten, sidaas daraaddeed, Adhijirradow, bal erayga Sayidka Rabbiga ah maqla. Sayidka Rabbiga Ilaahiinna ahu wuxuu leeyahay, arki adhijirradaan col baan ku ahay, oo aan gacantooda ka bixin doona adhi, iyo waxay joojin doonaan in ay ku quudiyaan lo'da. Mana waa in ay ka badan oo isu fatten, waayo, waxaan afkooda ka samatabbixin doona adhi, iyo waxay jidhkooda oo mar dambe ma jiri doono. "
Waxaan uga takhalusi doonaa daaqsinta nimankan ilkaha. Ilaah ayaa na caawinaya.
Marka labaad, baddalayso Ruuxa Quduuska ah barakaysan. Tani waa dulli ugu xumaa. Waxaa ka dhigi lahaa na dhacaan wajiga our. Habka kaas oo Ruuxa Quduuska ah la-yaacsan doonaan in ay dunida oo dhan.
Waa wax murugo leh in la ogaado in uu jiro waxgarashada darteed wax yar ka tagay ee kaniisadda oo ka mid ah wadaadada badan iyo hoggaamiyayaasha kaniisadaha. Waxay xitaa ma ogaan markii Ruuxa Quduuska ahi ku margado ama caayeen. Waxaa jira kumanaan Masiixiyiinta ah kuwaas oo u tag ololaha ka jaftay oo la arko waxyaabo ay rumaysan yihiin ka timaada Ruuxa Quduuska ah, laakiin iyagu ma ay yaqaaniin wixii ay helayso. Waxay sacbiyeen iyo Ilaah ku ammaanaan markii nin taagan madal waana caayeen oo been Ruuxa Quduuska ah, oo iyagu ma ay yaqaaniin waxa ku saabsan.
madaahibta dhan burjiga, oo ay ku jiraan dhaqdhaqaaq American Pentecostal, burburay by revivals been ah. Dhammaan noocyada kala duwan ee wax u dhacaan - wax cusub inta badan isbuuc kasta. Madaxdii Ma aqaano hadii ay qaataan ama ay ka habaartamaan. Iyagu ma ay aqoon waxa la sameeyo. Waxaan waraaqaha ka yimid boqolaal ka mid ah wadaadada oo dunida ku baahsan u helaan. Waxay ku weydiin. "Waa maxay xaq iyo waxa ka qaldan?" Aaway hoggaamiyeyaasha? Halkee waa qof na hanuunin kara?.
Saaxiibada, waxa aan u arkaa dhacaya maanta in waxa la yiraahdo revivals iyo waxa ka dhacaya Ruuxa Quduuska ah, oo aynaan ka heli karo aasaas u ah script ah. Wax kasta oo aynaan ka heli kartaa in Kitaabka waa in loo diiday. Si buuxda u diiday!
Waxaan u qaylin marka aan arko, kuwaas oo videos in dadku ay igu bixinayso ayaa ka guud ahaan dalka. jameeco dhan faraha ka baxay, dhacayay dhulka, qosol hysterically, dhacdhaco agagaarka sida kuwa sakhraanka ah, maroojin sida abeesooyin, dugaaggu ka dhex ciyaan sida xayawaanka duurjoogta ah. Waxaan leenahay wacdiyayaal, kuwaas oo kor u taagan iyo dhabasho daran dadka si aad u hesho iyaga u ah inuu dhaco, sida haddii Ruuxa Quduuska ah ayaa soo bixitaankii isaga. Eryaa jaakada brand ay dadka oo sheegtay in ay "gacanta Rabbiga."
injiilka A cusub ayaa u yimid inuu America. Saaxiibada, waxaa ka da.ay iyo cayriin, laakiin waxaan kuu sheegi. Marka aad ka tagto dhimaya hadalka, marka aad odhan: "Tani waa wax cusub, Ilaah waa wax cusub? Anigu ma fahmin, ma aha qoraal, laakiin ma doonayaan in ay iska caabin ah Ruuxa Quduuska ah. "
Saaxiibada, haddii aanay in Kitaabka Quduuska ah, waa in aanu u hor joogsataan. ugu dambeeyay waxa ay tahay in aad boqortooyadii Ilaah geli kari maayo haddii aadan jeclaan ilmo yar oo kale ha. Dadka imanayay oo ku labisan xafaayadda si ay u dhigi kara baahidooda inta lagu guda jiro kulamada. Waa dambayn. Saaxiibada, halkaas oo ay dhammaan doonto?
wadaad A ayaa yiri: "ilaa iyo haatan Waxa ay soo martay, in hal maalin, wacdiye u istaagaan oo waxaad ku tidhaahdaa, dajinta xagga Rabbiga Waxaan helay, waa wakhti si ay u bilaabaan Mary caabudno." Waxaa tegi doonaa meesha.
wacdiyi jiray mid kalena wuxuu isu nin baarka ka adeega ku Ruuxa Quduuska ah ku baaqeysaa. Waxa uu sheegay in, "Kaalay in ay ka bar iyo cabitaan ah Ruuxa Quduuska ah." Waxay u cabniinka oo khamri cusub wac. I maqla erayadii Nebi ayaa wacaya ee aan dhegahayga, "Maalintii Rabbiga ayaa halkan jooga, ahaaday xun, ooyin dhexeeya maxkamadda iyo meesha allabariga. Ku rid on joonyaddiisa oo dhar ah. Go'an oo murugoon qoomka dhacday. "
Ciise iman doonaa. tacsida weli gaarin. Marka aan arko Masiixiyiinta tag waxa ay wici bar ah Ruuxa Quduuska ah, dhacdhaco sida nin sakhraan ah, doono erayada Joel ee i si cad, "toos, waxaad tahay wax cabbeen, oo ooya, kuwiinna khamriga cusub cabbaan, waayo, beerta la gooynayaa baabba'a oo dhan."
Naftiinna kun dhintaan, sidaas waxa aad ku qosli? In Ruuxa Quduuska ahi yeelan doonaan in ay meel kasta ka shaqeeyaan on dhulka. Waa in aad u awoodaan in ay u qaataan in ay meelaha ugu Dullaysane iyo qudhmay. Waa in aad u awoodaan in ay u qaataan in ay dalalka saboolka ah. Waa in aad u qaadato in ay huubadiisa aadanaha, waana in ay jiraan shaqeeyaan. Ma shaqeyn karaan oo kaliya in America hodanka. Waxay leedahay in ay meel kasta ka shaqeeyaan on dhulka.
Waxaan raadinayaa in dadkani inay haatan ay injiilka qosol galay Balkans qaadan. Tag xeryaha qaxootiga halkaas oo haweenka ka qaylinaysa, maxaa yeelay raggooda ayaa la toogtay. gabdhahoodii la kufsaday. carruurta waa gaajaysan. Waxay ayaa laga badiyay guryahooda, si aad waydiisaa in ay u bar tagaan - Ruuxa Quduuska ah ayaa doonaya inuu iyaga ku qosla. Tani waxa loogu yeero nooleenta in Madison Square Garden socda xagaagan. Haddii aad karto script, aad qaaday culaabtii uu shirka quduuska ah, sida aad rabto in kor loo qaado cilmiga noocan oo kale ah.
Ha iga kuu sheegi kaasoo qosol. World. The dadka aan Yuhuudda ahayn kuwa aan cibaadada lahayn. Waxa uu noqday lanooga. In muddo sidaas u dhow socda Masiixa markii kiniisadda Ciise Masiix waa in la xayiran xasee qarsoon oo salaadda. Marka waa in u ooya lumay. Marka ay leeyihiin lahaa rabitaan ah in ay ka tagta oo dhan iyo raacdo Ciise. Marka abid biilka dollar waa in la soo sheegnay. ilaah The American. avgudadyrkandet The American. World daawashada waalli iyo aad u ogaato waxa ay la tahay - in Ruuxa Quduuska ah waa ringmaster ah. Waa in meeshu tahay meel burjiga.
Waxba igama gelin waxa ay dadku mar dambe qabaa. Wax dan ah kama haddii dad aadan rabin warsidaha dambe. Aan danaynayaa Naftooda iyo xaqiiqda ah in aad u badan ayaa la tiray. Waxaan waxa waajib ku ah Ilaah hortiisa in ka hor shirka in uu ii yeedhay si ay ugu adeegaan istaagaan, iyo inaad ugu Digtid Maka oo waxaad ku tidhaahdaa in cay kaniisadda weyn, iyo Kitaabka Quduuska ah ayaa sheegay in aad u barooran doonaan. odayaasha ayaa ku siin doona. Kaniisadda, wadaad, addoommadiisii, wacdiyayaal. Waxaan waa in la hoos u tukanayay qalcadihiisii ​​kuwan.
Ugu dambeyntii, cay ah quursi demoralization Assembly. Hoog waxaa leh kuwa sharka yidhaahda waa wanaag iyo sharka yidhaahda waa wanaag - in iftiin iftiinkana gudcur ku baaqay in gudcurka. In ay macaan iyo kuwa qadhaadh qadhaadh macaan dhigaysa. (Jer 23:15). Waxaan aragnay waxyaalo cabsi badan nebiyada. Way sinaystaan, waxay ku socdaan been, iyo xaqiiqaynta gacmaha kuwa sharka leh oo ka sharka soo laabtay.
Waxaan warqad todobaadkan ka qof dumar ah oo ka careysan Christian helay. Waxay tidhi, "Ninkayga, kuwaas oo qudhiisa ayaa ugu yeedhay Christian ah, waa ciyaaryahan weyn, waxa uu u ciyaaraa malaayiin ah." Waxay tidhi, "Waxaan si ka walwalsan halista iyo shirkadda in uu leeyahay." Waxaan u maleeyay, "Anigu waxaan weydiin inuu wadaad ka tago."
Waxay tidhi, "Walaal Wilkerson, aanad garanayn waxa ku dhacay, waxaan si cadhooday, yeelin oo wareersan ahay. Waxaan u dirray ninkeeda khamaarka multi-million oo ka mid ah wadaad. "
Waxa uu sheegay in, "Waxaan baadhay Qorniinku ka 1 Genesis in Revelation, oo anna ma aan ka heli kartaa wax Kitaabka ka gees hadli khamaarka. Waxaan arki dembi ma waxa ku jira, sidaas oo xiiso leh. "Waxa uu ahaa yaabayaan," sida nin Ilaah si dhihi karo waxan oo kale in ay ninkayga? "
Tani waa dhab ahaan waxa Yeremyaah wuxuu ku yidhi, "wadaadada caddaynaya gacmaha xumaanfalayaasha oo ninna jeedsada uu sharnimadiisa ka soo." Wuxu sheegay sababta ay u Dullaysan demoralization Assembly iyo sababta ay u xun wanaagga iyo xumaanta wanaagsan oo qadhaadh wac macaan iyo kuwa qadhaadh macaan.
Waxa uu sheegay in, "Prophets ka sinaysteen, oo been ku socdaan." Qof kasta oo dembi in naftiisa ka taagi doonaan oo ku saabsan dembi ee xerada. Waxa uu ka dhaadhiciyay uu sino u gaar ah, dembi uu isagu lahaa oo isaga u gaar ah maskaxda ku xun.
Ma sawiri addoommadiisii ​​kasta oo dalka ka weyn shanlo. Inta badan addoommadiisii ​​dabka, waayo, Ilaah. Waxaa jira addoommo oo dhallinyaro ah waxaa lagu nadiifiyaa in this da'da xun. Waxaan la kulmay dad badan oo iyaga ka mid ah oo Ilaah ugu mahad naqayaa, waayo, iyaga. Xitaa magaaladan, waxaan la kulmay qaar ka mid ah daaciyiinta ugu xaqa Waxaan la kulmay in nolosheyda oo dhan.
Dhibcaha doono oo addoomadiisa ila dareemaan murug iyo waxay raadinayso iyo sugayaan codad in Muujin kara waxa sharka ah. "Haddii ay guddigayga dhex istaageen maxkamadaha iyo dadkaygiiyow helay inay erayadayda maqlaan - haddii ay ku hadlay waxa ku jira qalbigayga. Haddii ay kula hadlay ka maanka Ilaah, waxay lahaa dadka iska jidadkoodii xumaa iyo xumaanta ay ka noqotay. "
Waxaad arki kartaa haddii nin ogyahay Rabbiga ahu wuxuu leeyahay ku saabsan oo kale, "ma aanan iyaga u soo diray, waxaan iyaga lama aan hadlin, waxay ku hadlaan ka mid ah ay ku fikirayaan u gaar ah. Out of sharka Quluubtooda.
"Waxay ku hadlaan riyooyinka qalbigooda ka, anigu kama aan soo diro. Anigu kuma hadlin iyaga. Waxay ku dhihi kuwa i quudhsada, wuxuu Sayidkayga ku yidhi, Waxaad doonaa nabad leeyihiin, 'oo waxay ku yidhaahdeen, mid kasta oo ka dib markii uu qalbigiisa u socda iyo duni isaga u gaar ah' wax shar ah oo aad ku dul degi doona. ' " cayda shirkii oo shir ku noqon lahaa murug ugu weyn ee dhammaan kuwa jecel Masiixa iyo kiniisadda. Tani waxay noqon lahayd murug ugu weyn Quluubtooda - cayda magiciisa iyo shirka. Oohinta badan Assembly gobolka. Marka aad u taagan yihiin, iyo marka aad qaadato Kanu waa warka culus ee Rabbiga in aad, iyada oo tukasho iyo soon maahee. Ilmo kasta oo Ilaah u baahan tahay inuu ku tukado in kuwa lagu qabto waxaas oo dhan in la sii daayay. Ha taaban, ha u dhow, haddii aad halkaas tagto soo baxay cajiib, waxaa aad wada hadleen doonaa waayo, waxaa soo jiidanaya oo dhan ee jidhka.
Ilaa aad ogaatid sida in la hadhuudhka ah Ruuxa Quduuska ah ka qabtaan, si joogto ka. Yeremyaah wuxuu ku yidhi, "Rabbiga Ilaahiinna ahu idin dhex waa xoog badan yahay. Oo wuxuu badbaadin doonaa, wuxuuna ku farxi doonaa inaad badan gabay. Wuxuu joogi doonaa jacaylkiisa. Waxa uu ku farxi doonaa inaad kaga gabyaya. "
Waa maxay sababta? Maxaa yeelay, wuxuu ka helay dad aan Murugoon waxa uu qalbiga ugu murugoodo. Qaadashada culaabta uu xanbaarsan yahay, cayda, ehelkeedu waa rasmi ah.
Tani waxay noqon doontaa ah "dabin jacayl". Waxaad maqli doontaa. "Waxaan jeclahay qof walba. Wax macno ah ma waxa aad ku wacdiyo. Wax macno ah ma haddii aad ku guulaysato. Wax macno ah ma waxa aad injiilka waa - ama wax kale. Aan ku siin kasta oo kale oo hab weyn. "Sidee laba wada socon karaan iyaga oo aan heshiis. Sida aad la socotaan karaa aadan ku raacsanayn, taas oo ah caadooyinka unbiblical, ma ahan. Waa u dabin jacayl ah. Waxay ku yidhaahdeen, "ma xukumi qof."
Taasi ma aha waxa Kitaabka Quduuska ah wuxuu leeyahay. Wuxu leeyahay in aanu xukumi doona xukunka xaqa ah. Cay iyo amaaneyaa samir. Waxaan ma taagnaan ha on saabuun saxan, waxaan on dhagax taagan. Ilaah waxa uu isku dayayaa si uu idiin badbaadiyo, Ward.
Waa maxay maal Ilaah ee Ciise Masiix? nabadda Ilaah, xagga xigmadda Ilaah, Masiixiisa, oo dhan waa in Masiixa annagaa leh.
Saaxiibada, iska jira! Iska ilaali!
Ma waxaan idinku cabsi? aad diyaar u ah inay qaataan on Kanu waa warka culus ee Rabbiga tahay. Waxaad ma samayn kartaa jidhka adiga kuu gaar ah. naftaada u leexo leh Ilaah.
Wakhtigii waa yimid inuu u soo yeedho shir quduus ah. Haddii aad leedahay mid ka mid ah cajalado ama buugaag, iyaga tuureen gurigaaga. Ha iska siiyo, gub, oo iyaga. Haddii qof kuu Yeedhi inuu ku biiro kulamadaasi, markaas uu ku odhan, "Waan ka xumahay, Ma doonayo in la gaajeeysan yihiin erayga iyo Ma doonayo in aan qalbigayga ku qalalaan Oo waxay u engegi. Waxaan doonayaa in aan erayga saafi ah xagga Rabbiga in loo oggol yahay igu si ay u koraan. Ma doonayo in aan fariin kasta oo soo jiidanaya jidhkayga, ama in la abuuro damac qalbigayga. "
Ilaah siinayaa waxa aan u baahan nahay oo uu sameeyo yaabab, laakiin wuuna sameeyaa hab isaga u gaar ah. Aan by ay lacago iyo si xun u isticmaalka Kitaabka.
Ibraahim waxa uu ahaa ma raadinaya dhulka hoostiisa ah, wuxuu filanayay magaalo ah oo loo dhisay oo abuuray by Ilaah.
Tani waa email akhriste. opinion Author waa iyaga u gaar ah oo daruuri ma aha waxa apg29 u taagan tahay.